Guddoomiyaha BFS ‘Mursal’ oo arrimo xasaasi ah kala hadlay Madaxda Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Guddoomiyaha BFS ‘Mursal’ oo arrimo xasaasi ah kala hadlay Madaxda Hirshabelle iyo...
Guddoomiyaha BFS ‘Mursal’ oo arrimo xasaasi ah kala hadlay Madaxda Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Golaha shacabka ee BF Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed.
Madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koofur galbeed Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) kulanka ay la qaateen Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka.
Mas’uuliyiintaan ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha ay isla soo hadal qaaday, sidii looga gudbi lahaa gudubka Marxaladda kala guurka ah ee dalka hadda ku jiro si gaar ah arrimaha doorashooyinka.
Shirka ka socda Muqdisho ee u dhaxeeya Madaxda DF Soomaaliya iyo Dowlad Goboledyada ayaa qodobbada qaar ee la isku mari la’yahay waxaa ka mid ah tirada ergada iyo guddiga doorashooyinka in laga wareejiyo hawsha.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay illaa shalay ka socday kulamo gaar gaar ah oo dhinacyada Siyaasadda ay si wadajir ah u yeelanayeen, taasi oo intooda badan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka.
Ugu dambeyn, waxaa si weyn isha loogu haayaa waxa ka soo bixi doona Shirka ka socda Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana la sugayaa habka la isugu afgarto qodobbada ugu xasaasisan ee hadda dooda ay ka taagan tahay.